Taageero dhaqaale oo dawladdu ku bixiso baaskiillada korontada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Gabar wadata baaskiil koronto ku socota. sawir: ANDERS WIKLUND / TT
Taageero dhaqaale oo dawladdu ku bixiso baaskiillada korontada
Miisaaniyadda cimilada ee xisbiga Miljöpartiet
La cusbooneeyay måndag 4 september 2017 kl 17.27
La daabacay måndag 4 september 2017 kl 16.06
Dawladda ayaa ku talo jirta 5 bilyan oo koron inay ku maal geliso sannadka foodda innagu soo haya sidii gacan looga geey-san lahaa dhowrista cimilada iyo maal-gelinteeda.
Maal-gelintaa ayay ka mid tahay taageero lagu bixiyo dadyoowga xiiseeynaya inay iibsadaan baaskiilka noocyadiisa korontada ku shaqeeya.
–Waxaa sidoo kale muhiimad ku fadhida sidii loo maal gelin lahaa is-bedel lagu sameeyo mashiinnada yaryar, sida mootooyinka iyo baaskiillada ku shaqeeya korontada oo bedel fiican u noqon kara gaariga, sida ay sheegtay wasiirka cimilada Isabella Lövin (MP).
Shir jaraa’id oo maanta lagu qabtay xarunta madaxtooyada Sweden ayey ka soo qayb galeen wasiirro ay farxadi ka muuqato wajiyadooda oo ka tir-san xisbiga Miljöpartiet Isabella Lövin iyo wasiirka dhaqaalaha suuqa Per Bolund.
Sannadka foodda innagu soo haya waxaa lagu maal-gelin doonaa cimilada dhaqaale gaarsii-san 5 bilyan oo koron oo marka la isu geeyo guud ahaan gaarsii-san 22 bilyan oo koron muddo saddex sannadood gudahood. Maal-gelin ay dawladdu ugu magac dartay ”maal-gelintii abid ugu badnayd ee cimilada".
–Waxaannu kor u qaadaney miisaaniyadda cimilada iyo bayada 100% kolka laga soo bilaabo sannadkii 2014 oo aannu xukunka la wareegney, waana maal-gelin iminka la dareemeyo, sida ay sheegtay Isabella Lövin.
Maal-gelinta dawladda ee cimilada ayay ka mid tahay awoodda korontada ee qorraxda (solceller) iyo sidoo kale maal-gelin goobeed, waxa lagu magacaabo Klimatklivet. 150 milyan oo koron ayaa la gelin doonaa bulshada doonaysa inay gawaaridooda ku buuxsadaan guryaha iyo kuwooda iibsanaya baaskiillada ama mootooyinka korontada ku shaqeeya oo qayb 25% qiimahooda ay dawladdu ku kabi doonto.
Baaskiilada caadiga ah maxaa taageero looga bixin waayay?
–Dadka badankoodu waxay leeyihiin baaskiillo caadi ah. Baaskiil ama mooto koronto ku socota waxaa loogu talo galay safarrada ka dhaadheer ee aan baaskiillada caadiga lagu tegi karin. Cidda aan tababar sidaa u wanaag-san qabin ee taageero u baahan kolka dalcad la fuuleyo, sida ay sheegtay Isabella Lövin.
Waxaa maanta jira fikirro kala duwan heerka ay wasakhdu uga yaraanayso ama ugu kordheeyso hawada Sweden, middaasina oo ku xiran hadba waxa la cabiro. Su’aashuse waxay tahay kharash intee le’eg ayaa lagu miisaaniyad gelin karaa sidii loo dhimi lahaa wasakhda hawada lagu sii daayo.
–Waxaan middaa ka cod-san doonnaa inay soo qiimeeyso wakaaladda xanaannada dabeecadda, sida ay sheegtay wasiirka cimiladu. Illaa iyo hadda tallaabooyinkii aan ka qaadney waxay wakaaladdu sheegtay inay yareeysay farqigii u dhexeeyay ee dawladdii Alliansen ee naga horreeysay ay ka tagtay iyo in aannu ku taagannahey dhabbadii aan ku gaari lahayn goolkii cimilada ee sannadka 2020.
–Iyo inaannu ugu dambeeyn gaarno eber sannadka 2045, sida uu baarlamanka iyo xeerka cimiladu qeexay, sida ay sheegtay.
Hoggaamiyaha xisbiga Center-ka Annie Lööf ayaanu ka fejecin miisaaniyadda dawladda ee cimiladu.
–Macne iiguma fadhido aniga inta bilyan ee dawladdu u qoondeeyso cimilada ee waxaa macne ku fadhiya natiijada. Maal gelintii xisbiga Miljöpartiet ee sannadihii ugu dambeeyey waxay dhalisay in wasakheeyntii hawadu kor u kacdo, halkii ay ka yaraan lahayd.
Jebinta baaskiillada korontada ku shaqeeya, ma tallaabo aad la dhac-san tahay baa?
–Xisbiga Center-ku wuxuu xoojin lahaa jeebabka bulshada iyada oo la dhimo canshuurta mushaarooyinka si suurtagal loogu helo in la soo iibsan karo baaskiillo, isla-markaana dhaqaale uga soo haro la kharashgareeyn karo, sida ay sheegtay Annie Lööf.